ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိက ပြော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိက ပြော
ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိက ပြော
Posted by cobra on Oct 16, 2010 in 2010/2012/2015 Election, News, Politics, Issues |5comments
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကိုယ်တိုင် ပြောသည့်အတွက် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ ဝမ်းသာရကြောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ငါကဒီmandalay gazette မှာသတင်းပဲတင်တယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က ပြောင်းပြန်ကြီး ရေးပြီး နောက်လိုက်လားသိဘူးနော်
If it is true, the happier the people are. We will boycott the election in millions nationwide.
ဟိုက် တော်တော်ရဲတဲ့သူပဲ သေနတ်မကြောက် သံတိုင်မကြောက်